Hevitra MPANOHARIANA | Kolontsaina | 7
Analakely: Miverina ny tsenam-piara sy lapan'ny tanàna (tohiny)
2008-05-13 @ 20:15 in Kolontsaina
Dia fahatsiarovana ve sisa ny fanapahan-kevitra hanakana araka izay azo natao ny fiantsonan’ny fiara izay amidy no tena nibahan-toerana teo Analakely? Nesorina tsy ankiteniteny manko ny fefy rehetra nanakana ny fiara tsy hiantsona tamin’iny andaniny sy ankilan’ny Arikady iny. Mazava loatra fa feno fiara “A VENDRE” indray izay azo nijanonana rehetra. Hita mazava tsara fa ny mpitantana ny tanàna no nanala azy ireny satria voatampina tara avokoa ireo faritra nanesorana ny vato rehetra.
Ny fanontaniana dia hoe hisy ve ny solony sa dia efa izay izany? Manaraka izany moa dia efa tafapetraka soa aman-tsara ilay takelaby efa nolazaiko andro vitsy lasa izay. Tsy mbola misy dokambarotra hita aloha nefa mampieritreritra ihany raha sarin’ny lapan’ny tanàna vaovao no hapetraka eo. Ilaina ve ny fandaniana be tamin’ny fananganana ilay takelaby raha tena izay tokoa no ho eo? Miandry fatratra izay sary hipetraka eo aho fa ianareo aloha tsy fantatro. Fa na izany aza tena mahavariana raha vitan’ny 240 000 000Ar ilay lapan’ny tanàna vaovao. Mampanontany tena hatrany manko hoe efa tafiditra amin’io tetibola io ve ilay takelaby mipetaka manakona ny zaridaina misolo ny lapan’ny tanàna ankehitriny? Tadidiko kosa fa nolazain’izay nametraka ny zaridaina endrika faharoa eo amin’io toerana io ihany manko fa nahatratra 200 000 000Ar ny tetibidin’ny nananganana ilay zaridaina. Dia hoy aho hoe vitan’izany tetibola izany rangahy koa naninona raha tonga dia ny lapan’ny tanàna no najoro? Tena samy manana ny paikany tokoa angaha ny tsirairay.
Manaraka izany izay nahadinika dia mahita mazava tsara fa tsy ilay endriky ny Lapan’ny tanàna may teo aloha intsony no kasaina haorina (raha hisy tokoa) fa endrika tiana ho amin’ny vanim-potoanan’ny taonarivo fahatelo angaha. Mifanakaiky kokoa amin’ny endriky ny Arikady andaniny sy ankilany manko ilay vinavina vaovao fa tsara jerena kosa aloha e! Anjaran’izay te-hiady hevitra amin’ny tokony hanovana na tsia ny endrik’ilay lapàn’ny tanàna kosa aloha fa ny mampita vaovao ihany no ataoko.
Zavatra hafa na mifampitohy aminy ihany aza. Izaho dia tsy nankasitraka velively ny hananganana indray ny lapan’i Manjakamiadana tamin’ny fotoana nampafana fo ny olona ka efa nahatonga ny andrintrano lehibe hazo iny aza. Tsy hitako hoy aho raha mbola trano hazo ihany no haorina eo nefa ny hazo sady mora may no mora boboka. Manaraka izany fotoana fanararaotan’ny mpanambaka sy ny te-hanankarena vetivety ihany koa ny zavatra sahala amin’ireny ka tsy nandrotsa-bola ho amin’ny fananganana azy mihitsy aho. Ankehitriny, noho izy najoro amin’ny alalan’ny vatosokay (ciment ka lasa béton) dia faly aho na dia mbola andalana aza ny fanarenana, hita tsara manko ny fandroson’ny asa, nefa voahaja tsara ny endrika nananany talohan’ny nahamay azy. Io vatosokay atao andrintrao io koa anie tsy maintsy rakofana hazo mba ho toy ny teo aloha ihany fa hafa kosa aloha ny hamafiny amin’izay fotoana izay. Mitohy ihany ny asa na dia re aza fa mbola tsy ampy be dia be ny vola enti-manao amin’ny fanarenana azy.
Ho afa-miditra soa aman-tsara ve raha mbola misy gazety vaovao?
2008-04-21 @ 13:47 in Kolontsaina
Efa bebe ihany izay ny gazety eto amin'ny tanàna izay raha mitovitovy daholo ihany izay ambarany, ka jerena avokoa ny lohatenim-baovao avoakan'izy ireo. Dia lasa ny saina mieritreritra hoe mety hahazo mpanjifa ve raha mbola misy gazety vaovao mivoaka indray? na gazety mivoaka isan'andro io na gazety mivoaka isa-kerinandro. Ahoana ny mety ho eritreritrao ho takelaka mbola banga eo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety malagasy ka hahatafitra izay vaovao mikendry ny hahomby na ho tafiditra soa aman-tsara na hahaliana ny mpamaky ny zavatra avoakany? Ny vaovao amin'ny teny malagasy no tsara kokoa sa ny vaovao amin'ny teny frantsay?
Nampidirin'i jentilisa | 7 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Antitra mampiady kalo ka ny antitra antitra ihany
2008-04-20 @ 20:58 in Kolontsaina
Loza mihitsy ity fiakinandoha amin’ny aterineto ity, fa tsy hay kosa aloha izy ity na mahadomelina na mandranitra. Nieritreritra ny tsy hikitika solosaina aty an-trano mihitsy aho androany alahady, fa tsy maintsy mikirakira azy mandritra ny fotoam-piasana, ho karazana fialantsasatra saingy e-he, nipololotra indray ny aingam-panahy. Revo tamin’ny fandaharana Anim’Artista na dia tsy ampy atsasak’adiny akory aza izay nojerena. Avela any ny filoha sy ny fahatezerany tany Toamasina amin’ny “asa tsy mandroso” satria rehefa dinihina toa noho ny tsy nahazoan’ny Alma (Asa Lalana Malagasy) ny tsena no mety ho ao ambadika ho fanomanana ny saina rehefa tonga ny fotoana esorina amin’ny Shinoa ny tsena dia omena ny orinasany.
Fandaharana mandeha isan’alahady alina ao amin’ny tvm ity Anim’artista ity. Ny mampiavaka azy dia artista no asaina nefa artista ihany koa no manentana, na manasa sy manontany ny vahiny, tsy adino (samy hafa amin’ny noadinoina) anatin’izany ny talentan’ny nasaina fa mandravaka ny fandaharana eny ihany. Tsimialonjafy tokoa ny fandaharana satria hita ao avokoa ny karazam-boninkazon’ny kanto malagasy amin’ny ankapobeny avy amin’ny lafy valo sy isa-taranaka ihany koa, na tanora vao misondrotra io na ny efa antitra mitezotezo.
Mpanao vako-drazana ela nihetezana fantatra kokoa amin’ny anaran’ny tarika no nasaina tao dia ny tarika Ny Voninavoko izany, ary tao mazava ho azy ny lehibe nanorina azy dia i Dadagaby. Efa be taona tokoa saingy tsy manaiky gisitra haneho ny talentany. Tsiriry ahitra ve? Raozy mavokely? Sa Zanak’Iarivo? Santionan’ny hira ahafantarana ny Voninavoko izany. Mety ho efa nokaloinao ny hira aza saingy tsy fantatrao izay tena mpihira azy. Fa raha mpihira ny ampahan’hira firedon’ny mpijery fanatanjahantena Malagasy mpamelombelona ny iô! Iô! iô ôhô! Ianao dia tsarovy fa nosintonina avy amin’ny hira mitondra ny lohateny hoe raozy mavokely ianao izay.
Fa inona no nahatery ahy hanoratra noho io fandaharana io? Malaza dia malaza eto amin’ny tanàna amin’izao fotoana izao ny hira mampandihy fitombenana. Izay mihetsika iray dia io fipelipeliky ny malesa io no hisintonana mpijery. Manao azy avokoa ny bodo sy adala rehetra io hany ka na dia ry Francis Turbo sy ny Gothlieb aza boboka tanteraka, nampisy adihevitra azy ireo tamin’ny mpihaino mihitsy moa ny nilazan’izy ireo ny heviny momba ny dihy ankehitriny io. Rehefa be loatra tokoa anie ny sira mampangidy e! Endrey kosa fa hay tena misy fahafinaretana ny mahita dihy tsy ahitana io fampandihizana fitombenana io mihitsy. Revin’antitra ve izany? Raha izany dia efa antitra mihitsy aho.
Nahatery ahy hanoratra ihany koa ny mahatsapa fa tsy hahavory olona firy (eto an-drenivohitra) mihitsy ny mpanao vakodrazana raha hanao fampisehoana fa na izany aza dia misy ny lalana ahafahana manampy ireny mpanao vakodrazana ireny. Tsy hevitra vaovao fa fahita ihany rehefa misy ny fanasana amin’ny fampakaram-bady ka tiana hakotroka ny raharaha. Mba manasà ry zareo mpanao vakodrazana rehefa misy fotoana lehibebe hampisehoana amin’ny taranaka ho avy fa misy anie ny karazan-dihy an’ny Malagasy izay tsy mba mandeha amin’ny haino amanjery loatra e! Asehoy ny zanatsika fa manana izay antsika madio mangarangarana ihany koa isika malagasy na dia saiky ireo sarangan’ny tsy mpigalabona loatra aza ny ankamaroan’ireo mpanao vako-drazana ireo. Famporisihana azy ireo hanohy ny fitandroana ny kazarankira ihany koa ny fanomezana valinkasasarana ho azy ireo satria fandaniana ihany koa anie na dia ny mitondra olona maromaro aza e!
Tonga eny Ivato i Rossy 
2008-04-17 @ 05:10 in Kolontsaina
Araka ny antso an-tarobia nataon'ny mpanakanto Rossy avy eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato dia tonga eto an-tanindrazana ny lehilahy amin'izao fotoana izao. Tamin'ny ora nanombohan'ny fandaharana kidaona maraina moa no niantsoan'ny lehilahy. Nolazainy ary fa miaraka amin'ny tarika miaraka aminy izy ka ny dimy dia teratany vahiny ary ny dimy hafa kosa dia malagasy. Milaza mbola hiresaka amin'ny tompon'andraiki-panjakana moa izy satria hajaina ny mpitondra fanjakana hoy ny tenany. Asa rahoviana izany no hotanterahina ny fampisehoana ataony eto an-tanindrazana?
Ny fanampim-baovao nataon'ny mpanao gazety no nandrenesana fa ny hihaona amin'ny filoha Ravalomanana no tanjony voalohany. Karazany tampoka ihany izao fahatongavany izao ka mety tsy hampino anareo nefa dia ren'ny mpihaino rehetra io. Marihina fa tsy misy tokony idiran'ny zavatra hafa ankoatra ny zavakanto ity resaka ity, ary zavakanto irery ihany.
Albert Rakoto Ratsimamanga: Tsy raharahan’ny fanjakana?
2008-01-03 @ 06:53 in Kolontsaina
Dia hihomehy angamba ianareo raha ilazako hoe ny tohiny indray no nivoaka talohan’ny fanombohana. Nefa dia izay indrindra no nitranga. Ity lahatsoratra (na ny marina kokoa ireto sary ireto) no tokony ho talohan’ny faran’ny taona teo (ny angolanao Ratsimamanga) fa noho ny fanadinoana dia niantsoromianotra ny fanehoana ny sary.
Tamin’ny roa ora sy sasany mahery aho no tonga tao amin’ny lapan’ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina. Efa nandeha ny hira mahafinaritra ny mihaino azy indrindra fa ny zavamaneno tendrena. Mahafinaritra sy sofina aok’izany ny mandre feonkira vahiny tendrena amin’ny valiha sy ny korintsana ary ny ampongatapaka. Noho ny fandrosoana moa dia tsy maintsy niasa ihany ny vatamarolafy (synthetiseur ho an’ny mahay teny malagasy ihany) saingy noho ny fo efa babo angaha dia tsy nahita izay lesoka ny tena, sady tsy dia havanana loatra amin’ny mozika rahateo. Gaga aho fa nifandimby mitendry ny hirany ireo tarika roa samihafa nefa dia tsy nisy fanolorana mihitsy teny an-tenantenany teny. Hay moa ka…
Lasa ny fotoana maromaro, nandray fitenenana amin’izay ny mpanolotra namerina ny fiarabana. Dia natao moa ny fombam-piarahabana mahazatra ny malagasy ary dia niteny i Di Rahaingosoa hoe: anatin’ny fitenenana dia misy ihany koa ny fialan-tsiny. Efa dila ny 20 minitra nifanarahana ka dia tsy maintsy atomboka ny fotoana. Malahelo dia malahelo ny vady navelan-dRatsimamanga raha mahita ny havitsian’ny olona tonga. Nihevitra izy fa tsy nahavita ny adidy nankinina taminay izahay tamin’ny fanapariahana tany amin’ny fampahalalam-baovao isan-karazany ity fotoana izay tsy misy vidim-pidirana ity. Efa nitety ny haino aman-jery ihany nilaza, ary efa nandefasana filazana avokoa ny fiangonana rehetra hahamora ny fandrenesan’ny rehetra ny fisiany saingy tsy tratra ny kinendry. Mety ho ny fanomanan’ny olona ny fety ihany koa no mahatonga ny tsy firaikan’ny olona na noho ny orana tsotra izao (avy mitsitapitapy hatrany ny orana na dia tsy nivatravatra loatra aza).
Ny tena nampalahelo dia tsy nisy solontenam-panjakana tonga mihitsy tao na dia iray aza (tsy nisy na solontena aza). Olomangan’ny firenena anefa no tsarovana sady Malagasin’ny taonjato XX mihitsy aza saingy… maro aza ny firenena tsy mba manana olona atao maodely ka mindrana ny an’ny hafa fa isika Malagasy efa manana olomanga amin’ny sehatra misy azy avy tsirairay avy saingy…Dia lasa ny eritreritro (izaho mpanoratra) hoe efa nahita ihany aho tany anaty boky tany (Madagascar le duel?) hoe tamin’ny fotoana nahafaty an-dRatsimamanga dia ninia nijanona tany Parisy ihany ny filoham-pirenena tamin’izany fotoana izany satria taranaka Padesm izy raha mpitolona mafana fo tao amin’ny Mdrm kosa ity nodimandry. Fanahy iniany mihitsy ho voalevina ny razana vao nitody an-tanindrazana izy. Fa ny an’ny mpitondra ankehitriny kosa, inona ny kakainy tamin’ity Olomangam-pirenena ity? Sa ve hoe aleo ny lasa homba ny lasa fa ny hoavy ihany no banjinina?
Efa niteny ihany koa moa ny mpanolotra hoe tsy hitahita ihany koa ny haino amanjery mba hampitan-kafatra ho an’ny vahoaka tsy mandady harona. Nisinsy ihany aloha ny mpaka sary tao fa mpaka sary fankam-bola angamba no tena betsaka tamin’izy ireo. Nisy fa tena vitsy tokoa ny mpaka sary handrakotra ny fitantarana ny fihetsiketsehana natao. Izaho moa tsy nanana fakana lahatsary, nisy naka aloha tao, fa raha tsy izany fifaliambe ho ahy ny nanana ny zavatra tsy maintsy ho vitsy mpanana tahaka ny nakana iny fotoana iny.
Na izany aza dia maro ihany ireo olom-baventy fantatry ny olona nanatrika toa ny Pasitera Andriamanjato Richard, ny Jeneraly Désiré Phillipe Ramakavelo, Ranjivason Jean Theodore, Odette Rahaingoson, Nalisoa Ravalitera, Suzy Ramamonjisoa, Ratrema William, William Rabemananjara sy ny hafa mety ho tsy tadidiko.
Ny tohin-dresaka moa dia efa nosoratako tany amin’ny “Ny angolanao Ratsimamanga any”.
Fa rehefa nivoaka moa ka saiky haka sary somary lavidavitra kokoa ny anoloan’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena dia ny atsanga no tena nanaitra (ireny ranontany sy ny fako izay mety miaraka aminy ireny nokaohin’ny riaka avy any Ankadilalana ireny no atao hoe atsanga raha tsy diso aho). Asa be hatrany hay no miandry ny Kaominina isaky ny avy ny orana raha tahaka izao k’ty. Fa mbola tanatin’ny fety moa ka dia sahirana amin-javatra hafa ny mpiasa e! i Mahamasina sy ny manodidina azy ity aloha hitako tena olona foana isaky ny orana e!
nosoratan'i jentilisa tamin'ny 3 janoary 2007
Nisy moa ny nangataka ny momba an-dRatsimamanga, ataoko fa hanampy azy ireo ity lahatsoratra tao amin'ny madagate ity.
Nampidirin'i jentilisa | Trackback (0) | Permalink
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Manaraka»
Ilay sary-sy-soratra nampigadra mpanora-gazety teto Madagasikara?
Ny fotoana tahaka izao no tena mety amiko
Hanohy fihibohana sa tsia?
Vahaolana politika amin'ny olana ara-pahasalamana
Eksodosy navilana milaza coronavirus (teorian'ny tetidratsy manerantany)